10 Ny toetra mampiavaka ny mpianatra
Ny mpianatra ambony dia mandrisika sy miasa mafy
Ny fampianarana dia asa sarotra. Ny valisoa farany dia ny fahafantarana fa manana fahafahana ianao hanana fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny tanora. Na izany aza, tsy ny mpianatra tsirairay no mitovy. Ny mpampianatra maro dia hilaza aminao fa tsy manana fialantsiny izy ireo, fa ny marina dia misy mpianatra manana toetra sasantsasany izay mahatonga azy ireo mpianatra tsara. Ireo mpianatra ireo dia manintona ny mpampianatra, ary sarotra ny tsy manaiky azy ireo satria mora kokoa ny asanao. Vakio ity mba hahitana ireo toetra folo izay manana mpianatra tsara manana.
Mametraka fanontaniana izy ireo
Ny ankamaroan'ny mpampianatra dia maniry ny mpianatra hangataka fanontaniana rehefa tsy mahatakatra hevitra izay ampianarina izy ireo. Izany no fomba tokana ahafantaran'ny mpampianatra raha tena mahatakatra zavatra ianao. Raha tsy misy fanontaniana atolotra, dia tokony hihevitra ny mpampianatra fa azonao ny hevitr'io hevitra io. Ny mpianatra tsara dia tsy matahotra ny mametraka fanontaniana satria fantany fa raha tsy manana hevitra manokana izy ireo dia mety handratra azy ireo any aoriana rehefa mihamitatra izany fahaiza-manao izany. Ny fametrahana fanontaniana dia matetika mahasoa ny kilasy amin'ny ankapobeny satria ny fahitana dia raha manana izany fanontaniana izany ianao, misy mpianatra hafa manana io fanontaniana io.
Mpiasa mafy izy ireo
Ny mpianatra tonga lafatra dia tsy voatery ho mpianatra mahay. Maro ireo mpianatra no nahazo fitahiana ara-boajanahary saingy tsy manana ny fifehezan-tena mba hanandrana io faharanitan-tsaina io. Ny mpampianatra dia tia ireo mpianatra izay misafidy ny hiasa mafy na inona na inona ny fahaiza-manaony. Ny mpianatra miasa mafy mafy indrindra no ho farany indrindra amin'ny fiainana. Ny maha-mpiasa mafinaritra azy any am-pianarana dia midika ho fanatanterahana ny andraikitra amin'ny fotoana, mametraka ny ezaka lehibe indrindra ho anao amin'ny asa rehetra, mangataka fanampiana fanampiny rehefa mila izany ianao, mandany ny fotoana hianarana amin'ny fitsapana sy ny fitsapana, ary ny fahatsapana ny fahalemena ary ny fitadiavana fomba hanatsarana.
Izy ireo dia mandray anjara
Getty / Hero Sary
Ny fandraisana anjara amin'ny hetsika ivelan'ny fandaharam-pianarana dia afaka manampy ny mpianatra hahazo fahatokisana , izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny fianarana. Ny ankamaroan'ny sekolim-pandihizana dia manome vahaolana amin'ny asa ivelan'ny fandaharam-pianarana izay ahafahan'ny mpianatra mandray anjara. Ny ankamaroan'ny mpianatra tsara dia mandray anjara amin'ny hetsika sasantsasany raha atletisma, Future Farmers of America, na filankevitry ny mpianatra . Ireo asa aman-draharaha ireo dia manome fahafaha-manao fianarana be dia be izay tsy afaka manao izany. Ireo asa ireo ihany koa dia manome fahafahana handray anjara amin'ny andraikitry ny mpitarika ary matetika izy ireo dia mampianatra ny olona hiara-hiasa amin'ny maha-ekipa iray hanatratrarana tanjona iraisana.
Mpitarika izy ireo
Ny mpampianatra dia tia mpianatra mahay izay mpitarika voajanahary ao an-dakilasy. Ny kilasy manontolo dia manana ny toetrany manokana ary matetika ireo kilasy misy mpitarika tsara dia tsara. Toy izany koa, ireo kilasy tsy manana mpitarika mitovy ireo dia mety ho sarotra indrindra hifehezana. Ny fahaiza-mitarika eo amin'ny fitantanana dia matetika voajanahary. Misy ireo izay manana izany ary ireo izay tsy manao izany. Izany koa dia fahaiza-mamolavola amin'ny fotoana hafa eo anivon'ny mpiara-mianatra aminao. Ny maha-azo itokisana azy dia singa manan-danja amin'ny maha mpitarika azy. Raha tsy matoky anao ny mpiara-mianatra aminao, dia tsy ho mpitarika ianao. Raha mpitarika eo anivon'ny mpiara-mianatra aminao ianao, dia manana andraikitra hitarika amin'ny ohatra sy ny hery fara-tampony mba handrisika ny hafa hahomby.
Faly izy ireo
Avy amin'ny toerana maro ny fanentanana. Ny mpianatra tsara indrindra dia ireo izay mazoto ho tonga fahombiazana. Ankoatra izany, ireo mpianatra izay tsy manana faniriana dia ireo izay sarotra indrindra hahatongavana, matetika dia ao anatin'ny olana, ary amin'ny farany dia miala amin'ny sekoly.
Ireo mpianatra izay mazoto hianatra dia mora hampianatra. Te ho any am-pianarana izy ireo, te-hianatra, ary te hahomby. Ny fanentanana dia midika zavatra samihafa amin'ny olona samihafa. Vitsy dia vitsy ny olona tsy manosika zavatra. Ny mpampianatra tsara dia hahalala ny fomba hamporisihana ny ankamaroan'ny mpianatra amin'ny fomba hafa, fa ireo mpianatra izay manentana ny tenanao dia mora lavitra kokoa noho ny tsy an'arivony.
Izy ireo dia Olana Solvers
Tsy misy fahaiza-manao tsy ampy mihoatra noho ny fahaiza-mamaha olana. Miaraka amin'ny fenitra iraisan'ny Common Core izay mitaky ny mpianatra ho sahirana amin'ny famahana olana, dia fahaizana matanjaka ny sekoly tsy maintsy miasa betsaka amin'ny fampivelarana. Ireo mpianatra izay manana ny fahaiza-mamaha olana dia vitsy ary lavitra eo amin'ity taranaka ity amin'ny ankapobeny noho ny fahazoana miditra izay tsy maintsy haparitany azy.
Ireo mpianatra izay manana ny tena fahaiza-mamaha olana dia kenky tsy fahita firy izay tian'ny mpampianatra. Azo ampiasaina ho loharanom-panampiana mba hampivelarana mpianatra hafa ho lasa olan'ny olana.
Manararaotra fahafahana izy ireo
Sary Getty Images / Johner Images
Iray amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra any Etazonia ny hoe ny ankizy tsirairay dia manana fanabeazana maimaim-poana sy fanabeazana. Mampalahelo anefa fa tsy ny olona rehetra no mandray tombontsoa amin'izany. Marina fa ny mpianatra tsirairay dia tsy maintsy manatrika sekoly mandritra ny fotoana voafetra, saingy tsy midika izany fa ny mpianatra tsirairay dia mandray io fahafahana io ary manatsara ny fahaiza-mianatra azony.
Ny fahafahana hianatra dia voaporofo ao Etazonia. Ny ray aman-dreny sasany dia tsy mahatsapa ny lanjany eo amin'ny fanabeazana ary lasa amin'ny zanany izany. Tena mampalahelo ny zava-misy mampalahelo izay matetika no tsy hita ao amin'ny hetsika fanavaozana ny sekoly . Ny mpianatra tsara indrindra dia manararaotra ireo fahafahana omena azy ireo ary manome lanja ny fianarana azony.
Olom-pirenena miorina izy ireo
Ireo mpampianatra dia hilaza aminao fa ny kilasy feno mpianatra manaraka ny fitsipika sy ny fomba fiasa dia manana fahafahana bebe kokoa amin'ny fanamafisana ny fahaiza-mampianatra azony. Ireo mpianatra izay manana fitondran-tena tsara dia mety hianatra bebe kokoa noho ny namany izay lasa antontan'isa momba ny fitsipi-pifehezana mpianatra. Betsaka ireo mpianatra mahay mandanjalanja. Raha ny marina, ireo mpianatra ireo dia matetika no loharanom-pahadisoan'ny mpampianatra satria izy ireo dia azo inoana fa tsy afaka manamaivana ny faharanitan-dry zareo raha tsy misafidy ny hanova ny fitondran-tenany.
Ireo mpianatra izay manana fitondran-tena tsara ao am-pianarana dia mora ho an'ny mpampianatra mba hiatrehana, na dia sahirana ara-pôlitika aza izy ireo. Tsy misy olona te hiara-hiasa amin'ny mpianatra izay miteraka olana foana, fa ny mpampianatra kosa dia hanandrana hanindra tendrombohitra ho an'ireo mpianatra izay hentitra, manaja, ary manaraka ny fitsipika.
Manana rafitra fanohanana izy ireo
Mampalahelo fa ity kalitao ity dia iray izay matetika ny mpianatra tsirairay dia manana fifehezana kely. Tsy afaka mifehy ny ray aman-dreninao na ny mpiambina anao ianao . Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa misy olona mahomby maro izay tsy manana rafitra fanohanana tsara mitombo. Izany dia zavatra azonao resena, nefa manamaivana kokoa izany raha manana rafitra fanohanana ara-pahasalamana eo amin'ny toerany ianao.
Ireo no olona manana ny tombontsoanao tsara indrindra. Manosika anao hahita fahombiazana izy ireo, hanolorana torohevitra, ary hitarika sy hanapaka ny fanapahan-kevitrao mandritra ny androm-piainanao. Any am-pianarana, manatrika ny fihaonamben'ny ray aman-dreny / mpampianatra izy ireo, hahazoana antoka fa ny devoaranao dia vita, mitaky anao hanana mari-pahaizana tsara, ary amin'ny ankapobeny dia mandrisika anao hametraka sy hahatratra ny tanjona akademika. Manana anao izy ireo mandritra ny fotoam-pahoriana ary faly anao izy ireo amin'ny fotoana mahomby. Ny fananana rafitra mpanohana lehibe dia tsy manao na manapaka anao amin'ny maha-mpianatra azy, saingy manome tombony ho anao izany.
Mendri-pitokisana izy ireo
Ny maha-azo itokisana azy dia hatsaran-toetra izay tsy hisian'ny mpampianatra anao ihany fa ny mpiara-mianatra aminao ihany koa. Tsy misy olona te-hifanerasera amin'ny olona izay tsy azony atokisana. Ny mpampianatra dia tia ny mpianatra sy ny kilasy izay atokisany satria afaka manome fahafahana azy ireo izy ireo izay matetika manome fahafahana hianatra izay tsy ho azony raha tsy izany.
Ohatra, raha misy mpampianatra manana fahafahana haka mpianatra maromaro hihaino lahateny ataon'ny filohan'i Etazonia, dia mety hampiato ny fahafahana ny mpampianatra raha tsy mendri-pitokisana ny mpianatra. Rehefa manome fahafahana anao ny mpampianatra iray, dia maneho finoana anao izy fa ianao dia azo itokisana ampy hanatrarana izany. Ny mpianatra tsara dia manome lanja ny fahafahana manaporofo fa azo itokisana izy ireo.
Atlantika Telegraph Cable Timeline
Ny fomba fiasa lehibe dia nampiseho fanoherana ny fanandevozana
Ireo oniversite ambony any Etazonia amin'ny taona 2018
Mifidy ny College Perfect
7 Fitiavana mahafinaritra momba ny fiarahabana maraina
Ny fomba hifohazana fientanam-panahy: 8 Tips
Ahoana ny fitsapana ny proteinina amin'ny sakafo
Ny History of Redlining
Ny fomba fianarana ny Code Morse
Nationalism amin'ny politika sy ny kolontsaina
Inona no anisan'ny programan'ny fianarana manokana?
Urban Legend: Maty nandritra ny 3 minitra ny kristianina kristiana ary nanampy an'i Allah tany an-danitra
Ny adihevitra momba ny fanarenana
Inona ny NASCAR?
Ny toerana tsara indrindra hianatra teny vaovao isan'andro
Fiainana any amin'ny tanim-bosaka maoderina
5 Ohatra avy amin'ny famonoana simika
Ahoana ny famakiana milina fiara
Ny tantaran'ny fampihorohoroana
Fantaro hoe ahoana ny Aretin'ny Aretin'ny Vatana
Amin'ny fampiasana gilasy amin'ny tennis tennis
Inona ny lokon'iza ny volon'i Aleksandra Lehibe?
Art Supplies Shopping List ho an'ny sary hosodoko Acrylic
Miverina avy amin'ny curvain'ny maty: Jan sy Dean
Ny Quest for the Nil
Eat Right for Rock
Ahoana ny fifandraisan'i Global warming sy ny helodranomasina?
Colours Lightsaber: Avy aiza izy ireo ary inona no tiany